အင်ပြင်(အနီကွက်) ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲ..? ပျောက်ကင်းရန်နည်းလမ်းများ by popolay.com
04 May 2018 8,751 Views
ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာ ခြင်ကိုက်ဖုလို သေးသေးလေးတွေကစပြီး ထူထူပိန်းပိန်း အနီရောင်ပြင်လိုက်ကြီးတွေ နေရာအနှံ့မှာ ပေါ်လာတာကို “အင်ပြင်” လို့ လူသိများပြီး ဆေးပညာအရ ““Urticaria” လို့လည်း ခေါ်ပါတယ်။
အင်ပြင်ဟာ ကလေးလူကြီး အချိန်ခါမရွေး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
အင်ပြင်ဖြစ်လာတဲ့အခါ အဖုအပိန့်တွေနေရာက မနေနိုင်မထိုင်နိုင်အောင် ယားတော့တာပါပဲ။ ယားတော့ ကုတ်တယ်၊ ကုတ်လေ ယားလေနဲ့ သံသရာလည်နေပါတယ်။ အင်ပြင်ဟာ ရောဂါတစ်ခုမဟုတ်ပဲ ခန္ဓာကိုယ်ထဲက သွေးနဲ့ဓါတ်မတည့်တဲ့အခါ ဖြစ်တတ်တဲ့ အလာဂျီ(Allergy) တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ အစားအသောက်ကြောင့် ဖြစ်နိုင်သလို ရာသီဥတုနဲ့ အခြားအကြောင်းတွေကြောင့်လည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
“အရောင်ကြောင့်လည်း ဖြစ်တတ်တယ်”လို့ အဝါရောင် အဝတ်အစား(ဘယ်လိုအမျိုးစာဖြစ်ပါစေ) ဝတ်တိုင်း အင်ပြင်ဖု ထလာတတ်တဲ့ သူတစ်ဦးက ပြောပြတာ ထူးထူးဆန်းဆန်း ကြားဖူးပါတယ်။
ဒါကြောင့် အင်ပြင်နဲ့ မတည့်တဲ့ အစားအသောက် ပုံစံဟာ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး မတူတဲ့အတွက် ဘယ်အစားအသောက် အနေအထိုင်ကိုတော့ ရှောင်ပါဆိုတာ ပြောရခက်ပါတယ်။
အင်ပြင်ဖြစ်သူ အများစုနဲ့ မတဲ့တတ်တဲ့ အစားအစာတွေကတော့ အခွံမာတဲ့ရေသတ္တဝါတွေနဲ့ အစေ့အဆံတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အမွှေးပွတဲ့ အနွေးထည်၊ ဂွမ်းစောင် တို့ကြောင့်လည် ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ရာသီဥတု၊ အနံ့၊ အရောင်၊ ရေ၊ နေရောင်ခြည် အစရှိသည်တို့ကြောင့်လည်း ဖြစ်တတ်တဲ့အတွက် တစ်ဦးချင်းစီအလိုက် သတိပြုရှောင်ရှားရမယ့် အရောတွေက ကွဲလွဲပါလိမ့်မယ်။ (ကိုယ်တိုင်က သတိထားဆန်းစစ်ဖို့ လိုပါတယ်)
အင်ပြင်ဟာ နှလုံးခုန်မြန် အသက်ရှုကျပ်ပြီး ဆေးရုံတက်ရတဲ့အခြေနေထိ အဆိုးရွားဆုံး ဖြစ်တတ်တာကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်မှာ အင်ပြင် ထလာပြီဆိုတာ သိတာနဲ့ တစ်ပြိုင်နက် နီးစပ်ရာ ဆရာဝန်နဲ့ အမြန်ဆုံးပြသင့်ပါတယ်။
အင်ပြင်အတွက် အများဆုံး သုံးလေ့ရှိတဲ့ သောက်ဆေးကတော့ Cetirizine (စီထရက်ဇင်း) ဖြစ်ပြီး နာမည်အမျိုးကွဲများစွာနဲ့ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ဆေးအာနိသင်အရ အိပ်ချင်တဲ့စိတ်ကို ဖြစ်ပေါ်တာကြောင့် ဂရမ်နည်းတဲ့ 5mg, 10mg လောက်ကို တစ်ပြားလောက် သောက်လိုက်မယ်ဆိုရင် သက်သာနိုင်ပါတယ်။
Burmeton (ဘာမီတွန်) နဲ့လဲ သက်သာစေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘာမီတွန်က အိပ်ချင်စိတ်ကို ဖြစ်စေလို့ ကားမောင်းတဲ့အခါ၊ အလုပ်လုပ်နေချိန်တွေမှာ မသင့်တော်ပါဘူး။ ညဘက်မှာ သောက်မယ်ဆိုရင်တော့ အင်ပြင်ရဲ့ အခြေအနေလိုက်ပြီး တစ်စိတ်၊ တစ်ခြမ်း စသည်ဖြင့် ချိန်ဆ သောက်ပါ။
ဆေးအားလုံးကို ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်နဲ့ သောက်တာက ပိုပြီးမှန်ကန်သလို အစာနဲ့ တွဲပြီးသောက်ဖို့လဲ မမေ့သင့်ပါဘူး။
အင်ပြင်ကို သက်သာအောင် လူဆေးအနေနဲ့ “CADRYL” ဆိုတဲ့ လိမ်းဆေးကို ဆေးဆိုင်တွေမှာ အလွယ်တစ်ကူ ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ ဆေးကို အင်ပြင်ပေါက်တဲ့နေရာတွေမှာ လိမ်းပေးလိုက်ပါ သိသိသာသာ ချပ်သွားပြီး အယားလည်း သက်သာသွားပါလိမ့်မယ်။
“Calamine lotion” ကိုလည်း လိမ်းနိုင်ပါတယ်။
ဆရာဝန်အနီးနားမှာ မရှိရင်ဘယ်လို သက်သာအောင်လုပ်ရမလဲ..?
အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ဆရာဝန်ထံ ချက်ခြင်းမသွားနိုင်တဲ့အခါ ရှေးတုန်းက လူကြီးတွေ လုပ်တဲ့ နည်းလမ်းလေးတွေကလည်း သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။ အောက်ပါနည်းတွေကိုမသုံးမီ အင်ပြင်ပေါက်တဲ့နေရာတွေကို သန့်စင်စွာ (ရေကြက်သီးနွေးနဲ့ဖြစ်စေ) ဦးစွာဆေးကြောပါ။
(၁) ဆားနဲ့ ဂျင်းကို ရောလိမ်းပါ။
ကျောက်ပျဉ်ပေါ်မှာ ဆားအနည်းငယ်ဖြူး၊ ရေအနည်းငယ်နဲ့ ဂျင်းတုံး ရောကာ သွေးပြီး ရလာတဲ့ အနှစ်ကို အင်ပြင်ဖုတွေပေါ်မှာ လိမ်းပေးနိုင်ပါတယ်။ (စပ်ဖျဉ်းဖျဉ်းနဲ့ ယားတာကို သက်သာစေပြီး အဖုတွေ ချပ်သွားစေနိုင်ပါတယ်)
(၂) ဘာမီတွန်နဲ့ သနပ်ခါး ရောလိမ်းပါ။
ကျောက်ပျဉ်ပေါ်မှာ သနားခါးနဲ့ ဘာမီတွန် တစ်ပြားလောက် ရောပြီးသွေးပါ၊ ရလာတဲ့ အနှစ်ကို အင်ပြင်ဖုများပေါ် လိမ်းပေးပါ။
လေစိမ်းတိုက်မခံပါနဲ့။ အချိန်အခါသင့်ရင်တော့ ဆရာဝန်နဲ့ သွားရောက်ပြသပြီး နည်းလမ်းမှန်ကန်စွာ ဆေးကုသမှုခံယူပါ။